Dibadbaxayaasha Suudaan oo xiriirka u jaray guddiga milatariga - BBC News Somali
Dibadbaxayaasha ayaa weli ku sugan magaalada Khartuum
Hoggaamiyeyaasha dibadbaxyada Suudaan ayaa sheegay inay xiriirka u jareen guddiga milatariga ee beddelay hoggaamiyihii xilka laga tuuray ee Cumar al-Bashir.
Waxay ku eedeeyeen inay yihiin haraadiga xukuumaddii al-Bashir.
Hogaamiyaha Sudan oo ku dhawaaqay xukun degdeg ah
Milatariga ayaa sheegay inay ka go`antahay inay xilka wareejiyaan isla markaana ay ka fekeri doonaan guddi isugu jira milatari iyo rayid.
Ururka ayaana ka dambeeyay ku dhawaaqitaanka guddiga.
SPA ayaa shalay wadahadallo la yeelatay guddiga milatariga.
Muxuu milatarigu sameyn doonaa?
Cumar al-Bashir ayaa waxaa xilka ka tuuray milatariga dalkaas kaddib bilooyin ay dibadbaxyo socdeen
Muuqaal, MUUQAAL: Geed cambe ah oo ay saddex jiil kala dhaxleen